Nanainga ny fameperana i Anguilla: Avelan'ny governemanta ny hetsika sosialy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nanainga ny fameperana i Anguilla: Avelan'ny governemanta ny hetsika sosialy
Anguilla Lifts Restriction: Government Allows Social Movement
Ny governora IZY Tim Foy sy ny Hon. Ny praiminisitra Victor Banks dia nanambara ny fanesorana ireo lalàna mifehy ny hetsika sy fivoriambe rehetra, nanomboka ny Alarobia 29 aprily. tsy misy tranga mihetsika na ahiahiana COVID-19 any Anguilla, ary ny Lehiben'ny mpitsabo dia nanoro hevitra ny Conseil Executive tamin'ny 27 aprily fa rehefa manainga fameperana i Anguilla dia midika izany fa azo esorina soa aman-tsara izy ireo.
Midika izany fa afaka misokatra manomboka amin'ny Alarobia 29 aprily ny fiangonana, toeram-pivavahana, fivarotana rehetra, salon de volo ary fivarotana mpanety, mpamatsy trano fandraisam-bahiny, gym sy spa, toeram-pialamboly, loteria ofisialy, trano fisakafoanana ary fisotroana.
Ny governora sy ny praiminisitra dia nisaotra ny Anguillians tamin'ny fanohanan'izy ireo tamin'ny fanarahana ny fameperana raha mbola teo amin'ny toerany izy ireo, ary tamin'ny fanatanterahana an'io zava-bita lehibe io. Nampitandrina ihany koa izy ireo mba tsy hanjary ho afa-po ary nangataka ny hanohizan'ny tsirairay amin'ny fanajana ny fiaraha-monina. Ireo tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana ara-tontolo iainana any Anguilla dia hitsidika ny toeram-pivarotana rehetra amin'ny herinandro ho avy mba hijery ny fanarahan-dalàna mifehy ny fahasalamana momba ny tontolo iainana, amin'ny fitadidiana ny maha-zava-dehibe ny fahadiovana fototra mba hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra rehetra.
Ny Governora sy ny praiminisitra koa dia nanamarika fa ireo na ny fameperana hafa dia mety hampidirina indray raha miova ny toe-javatra.
Hikatona hatrany ny seranan-tsambon'i Anguilla raha hihetsika ny mpandeha mandra-pahatongan'ny toe-javatra ivelan'i Anguilla averina hisokatra soa aman-tsara ho an'ny fifamoivoizana ivelany. Tsy mbola voafaritra mazava ny daty voafaritra fa toa tsy alohan'ny faran'ny volana Mey. Betsaka ny sidina fampodiana an-tanindrazana ho an'ny teratany vahiny no hatao amin'ity herinandro ity. Ireo sidina ireo - izay nangatahin'ny governemanta any ivelany amin'ny fomba ofisialy - dia hatao ao anatin'ny fandaminana mifehy toy izay napetraka teo aloha ihany. Ho tonga foana ny fiaramanidina rehetra, miaraka amin'ny fiaramanidina sisa tavela ka hisorohana ny fifandraisan'ny mpiasa amin'ny tany.
Ny Hon. Fantatry ny praiminisitra Victor Banks fa be ny Anglisy any ampitan-dranomasina maniry hody nefa tsy afaka noho ny fanidiana ny sisintany ankehitriny. Miasa izy ireo izao mba hametraka ny fandaminana hahafahany miverina soa aman-tsara, ary hambara ny pitsopitsony amin'ny andro ho avy. Ny fametrahana ny fahafaha-manao eto amin'ny nosy mba hizaha toetra tsara ny viriosy, ny fanitarana ny toerana misy ny quarantine ary ny famoronana programa miverimberina miverina izay mifanaraka amin'ny fahaizan'ny nosy hitsapana sy ireo olona quarantine no tena takiana.
Ny fidinana an-tsambo tsy ara-dalàna no mijanona ho fandrahonana lehibe indrindra amin'ny fahasalamana sy fiarovana an'i Anguilla ary fiarovana an'i Anguilla amin'ny fidirana tsy ara-dalàna no laharam-pahamehana ho an'ny governemanta. Ny fisafoana an-tanety, ranomasina ary fiaramanidina mifandrindra dia mijanona eo amin'ny toerany, ary izay manandrana na manampy ny fiampitana tsy ara-dalàna dia hosamborina.
Niaiky ny governoran'ny HE Tim Foy sy ny praiminisitra Victor Banks fa ny dingana izay nalain'i Anguilla dia manampy amin'ny fiarovana ny nosy. Na izany aza, tsy misy tranga mihetsika tsy midika hoe tokony hatsahatra ny fomba fidiovana na ny fitsipiky ny taovam-pisefoana, ary nanentana ny Angilianina rehetra izy ireo mba handray ny dingana tsotra mamonjy aina:
Sasao matetika ny tananao;
Sarony ny kohaka sy mievina amin'ny tavy azo ovaina, na eo an-tendron'ny kiho mihodina;
Manadio matetika ary mamono otrikaretina sy toerana iasana; ary
Aza mifanerasera amin'ny olona mijaly na mampiseho soritr'aretin'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny gripa, kohaka ary sery.
Ho an'ny torolàlana farany indrindra, ny fanavaozana sy ny fampahalalana momba ny valintenin'i Anguilla sy Anguilla dia mametra ny fameperana mba hahitana ny areti-mifindra COVID-19 amin'ny fomba mahomby, tsidiho azafady www.iternancf19.ai
Romance? Fahasoavana tsy mitapoka? Chic tsy mifangaro? Ary fahasambarana tsy voafehy? Anguilla dia Beyond Mahagaga. Ary manainga fameperana i Anguilla no vaovao tsara indrindra amin'ny dia an-tongotra.
Alika amerikana voalohany voamarina miaraka amin'ny Coronavirus
AHLA mankany amin'ny Kongresin'i Etazonia: Mila fampindramam-bola PPP bebe kokoa ny trano fandraisam-bahiny mba hamonjy asa